Kooxda Man United oo diyaar u ah inay xagaaga soo aaddan iska iibiso Paul Pogba & Labada laacib ee ay u aragto bedelkiisa oo daaha laga rogay – Gool FM
(Manchester) 11 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso ciyaaryahankeeda Paul Pogba suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga soo aaddan.
Red Devils ayaa laacibkan reer France waxa ay bedelkiisa u aragtaa labada ciyaaryahan ee Van de Beek iyo Saul.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Waddanka Ingiriiska ayaa warinaya in Manchester United ay diyaar u tahay inay Paul Pogba u ogolaato inuu isaga tago kooxda dhammaadka xilli ciyaareedka, waxaana ay bartilmaameedsanayaan labo xiddig oo ay u arkaan bedelkiisa.
Laacibka khadka dhexe ee reer France ayaa muddo dheer la la xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono horyaalka Premier League, iyadoo kooxaha xiiseynayana ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona iyo Juventus.
Man United ayaa diyaar u ah inay heshiiska meel mariso, waxayna raadineysaa xiddiga kooxda Ajax ee Donny van de Beek iyo kan kooxda Atletico Madrid ee Saul Niguez si ay ugu buuxiyaan booska Pogba.